E-bike Route Proposed for Bagan | Myanmar Business Today
Home Business Local E-bike Route Proposed for Bagan
The Bagan Tour Guide Association has urged the Ministry of Hotels and Tourism and the District Administration Office to implementaspecific route for electric bicycles in order to prevent e-bike related accidents and ensure safe riding experiences.
“We proposed the plan during our last meeting on October 20,” the association’s president, U Than Htay, told Myanmar Business Today. “Locals and foreigners are using more e-bikes while the roads in Bagan are too narrow and full of cars, motorbikes and tractors. It’s too dangerous for e-bike riders.”
Implementing an e-bike route could reduce traffic accidents as well as road risk to foreign visitors. Previously, horse carriages, decorated bullock carts and bicycles were popular choices among visitors to Bagan. Starting about three years ago, many have switched to battery-powered e-bikes.
“E-bikes are cheaper compared to other transportation modes, so visitors are choosing e-bikes over others,” said U Than Htay. “But e-bike rental services do not provide helmets to clients. That’s dangerous for visitors.”
E-bike rental fees in Bagan are about K6,000 per day. The rental services are doing well withatotal of 500 e-bikes in the city, which was namedaUNESCO World Heritage Site in July.
ပုဂံတွင် E-Bike သီးသန့်လမ်းဖော်ဆောင်ပေးရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြထား
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွင် E-Bike သီးသန့်လမ်း ဖော်ဆောင်ပေးရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး နှင့် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဂိုက်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြတောင်းဆိုထားကြောင်း ပုဂံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်းမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်ကို ဒေသဆိုင်ရာ ပုံတွေ့ဆုံပွဲတွင် တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး E-Bike စီးနင်းရာတွင် ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်မဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်က တင်ပြခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေကော ပြည်တွင်း ခရီးသွားတွေကောက အခုနောက်ပိုင်း E-Bike ကိုပဲ အသုံးပြုလာကြတယ်။ ပုဂံမှာရှိတဲ့ လမ်းတွေက အရမ်းကို ကျဉ်းတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ထော်လာဂျီတွေ သွားလာနေတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် E-Bike စီးနင်းသူတွေအတွက် အရမ်းကို အန္တရာယ်များပါတယ်” ဟု ပုဂံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးက MBTသို့ ပြောသည်။
E-Bike စီးရန် သီးသန့်လမ်းများဖော်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်မည့်အပြင် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းရသည့် ပြသနာများကိုလည်း အထိုက်အလျောက် လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခင်က ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် မြင်းလှည်း၊ စက်ဘီးနှင့် လှည်းယာဉ်များကိုသာ ငှားရမ်းသွားလာကြပြီး လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်မှစတင်၍ ဘက်ထရီဆိုင်ကယ်များ ဖြစ်သည့် E-Bike ယာဉ်များကိုသာ ငှားရမ်းအသုံးပြုလာကြသည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကစပြီး ဘက်ထရီဆိုင်ကယ်တွေကို အသုံးပြုလာကြတယ်။ ဒီလိုသုံးလာတာကလည်း ဈေးနှုန်းက တခြားဟာတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးသက်သာတယ်။ ဒါကြောင့် ဧည့်သည်တွေက ငှားရမ်းအသုံးပြုလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် E-Bike ငှားတဲ့ဆိုင်တွေက စီးသူတွေအတွက် ဦးထုပ်တွေမပေးဘူး။ ဒါကလည်း ခရီးသည်တွေအတွက် အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငှားတဲ့ဆိုင်တွေက ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုတ်တွေ ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်” ဟု ဦးသန်းဌေးက ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောသည်။
ပုဂံတွင် E-Bike ငှားရမ်းအသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်ရက်လျှင် ၆၀၀၀ကျပ် ဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး E-Bike အငှားဆိုင်တိုင်းတွင် ယာဉ်လက်ကျန်မရှိ နေ့စဉ်ငှားရမ်းနေကြရပြီး ပုဂံ ညောင်ဦးဒေသ၌ ယာဉ်အစီးရေ ၅၀၀ခန့် အထိ ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းက ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရီးသွားဝင်ရောက်မှှုမြင့်တက်လာမည်ဟု ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
Previous articleWith Impeachment as Backdrop, Democrats Direct Fire at Trump in Debate
Next articlePrice Dropped to K25 Million for Land Plots in Naypyidaw